Rooble oo xilka la wareegay
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta si rasmi ah xilka ugala wareegay sii-hayaha ra’iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Khadar.
Maxamed Xuseen Rooble ayaa 23-kii bishan waxaa codka kalsoonida siiyey Xildhibaanada Golaha Shacabka, kadib markii uu madaxweyne Farmaajo magacaabay 17-kii bishan.
“Horumarro badan ayaa laga gaaray Arrimaha Gudaha, Arrimaha Dibadda, sugidda amniga, caddaaladda , waxbarashada, caafimaadka, dhaqaalaha, dib-u-heshiisiinta, dib-u-eegista dastuurka, hagaajinta nidaamka diiwaangelinta shaqaalaha rayidka iyo ciidamada qalabka sida,” ayuu yiri Mahdi Guuleed oo ka hadlayey horumarada ay sameysay xukuumadda.
Ra’iisul Wasaare Rooble oo ka hadlay arrimaha mudnaanta iyo hor-tebinta u leh xukuumaddiisa, waxaana uu sheegay inay ugu muhiimsan yihiin arrimaha Amniga, Doorashooyinka, Horumarinta Dhaqaalaha, Caddaaladda iyo Adeegga Bulshada.
Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Cabdulqaadir OK.